Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica na onye nnọchi anya Dominican Republic na Jamaica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica na onye nnọchi anya Dominican Republic na Jamaica
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Onye nnochite anya Dominican Republic na Jamaica na Minista njem nlegharị anya nke Jamaica
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, (nke a na -ahụ n'aka nri na foto) na -ekele onye nnọchi anya Dominican Republic na Jamaica, Onye isi ala Angie Martinez Tejera, n'oge nzukọ pụrụ iche n'ọfịs ya na Septemba 1, 2021.
Ndị isi abụọ ahụ tụlere mmekọrịta na -aga n'ihu na ọdịnihu dị n'etiti mba abụọ ha.
Ohere nke iwebata ụgbọ elu dị n'etiti Jamaica na Dominican Republic dịkwa na tebụl.
Njem nlegharị anya nke Minista Jamaica ka na -agba mbọ ịhụ na mpaghara njem na -enye nkwado zuru oke.
N'oge nzukọ ha, ha kparịtara ime ka mmekọrịta dị n'etiti Jamaica na Dominican Republic tinyekwa ohere iwebata ụgbọ elu dị n'etiti mba abụọ a.
Ministri njem nlegharị anya nke Jamaica na ụlọ ọrụ ya nọ na -arụ ọrụ ịkwalite ma gbanwee Ngwaahịa ndị njem nke Jamaica, ebe ị na -ahụ na uru ndị na -esite na mpaghara njem na -abawanye maka ndị Jamaica niile. Iji mezuo nke a, o tinyela atumatu na atụmatụ ga -enye ohere maka njem nlegharị anya dị ka injin uto maka akụ na ụba Jamaica. Ministri a na -agbasi mbọ ike ịhụ na mpaghara ndị njem na -enye nkwado zuru oke maka mmepe akụ na ụba Jamaica n'ihi nnukwu ego ha nwere.
na Njem nleta Jamaica Ministri, ha na -ebute ebubo iji wusie njikọ dị n'etiti njem nleta na mpaghara ndị ọzọ dịka ọrụ ugbo, imepụta ihe na ntụrụndụ, na ime nke a gbaa onye Jamaica ọ bụla ume ka ọ rụọ ọrụ nke ya n'ịkwalite ngwaahịa njem nlegharị anya nke mba ahụ, ịkwado ego itinye ego na imezi na ime mgbanwe. ngalaba a iji kwalite uto na imepụta ọrụ maka ndị Jamaica ibe ha. Ministri a na-ahụ nke a dị oke mkpa na nlanarị na ihe ịga nke ọma Jamaica ma mee usoro a site na ntinye aka, nke ndị na-ahụ maka ebe a na-eme njem na-akwagharị, site na nnukwu ndụmọdụ.